Duco Iyo Daraaran, Sinaanta Iyo Cadaaladu Waa Tubta Horumarka Somaliland ! Ku :- Socota Madaxweynaha La Doortay Ee J.S.L - waxa ku doortay dhamaan
Wednesday 29th November 2017 12:59:04 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Sare
Duco Iyo Daraaran, Sinaanta Iyo Cadaaladu Waa Tubta Horumarka Somaliland ! Ku :- Socota Madaxweynaha La Doortay Ee J.S.L - waxa ku doortay dhamaan waxa ku doortay dhamaan bulshada reer soomaaliland taas oo kuugu dooratay wixii aad u sheegtay in aad wax ka qabanaysid.
Mudane:- Muuse Biixi Cabdi iyo madaxwayne ku xigeen
Mudane:- C/raxamaan C/laahi Ismaaciil (saylici)
Asalaama caylkum waa raxama tulaahi waa barakaatu
Mudane madaxwayne waxa aan jecelaystay in aan ka qayb qaato horumarka dalka Somaliland taas oo aan jecel ahay in aan kuu soo mariyo warbaahinta sharafta leh ee Somaliland iibgaysa markasta !
waxa ku doortay dhamaan bulshada reer soomaaliland taas oo kuugu dooratay wixii aad u sheegtay in aad wax ka qabanaysid.
Alle waa kugu guulayey in aad ku fadhiisato kursigii dalka laga xukumayey taasi waxa ay wada u xaadhaysaa in fuliso wixii aad umada u balan qaaday alle ha ku waafajiyo.
1 ) sinaanta iyo cadaaladu waa tubta horumarka
taasi waa ta keliya ee dalkani lagu wada yeelan karo maxaa yeela haddii
Wiil wasiir dhalay weedhisa ay tahay weligeey anaa iskaleh oo waan ku waari doonaa.
Wax aan marnaba fursad helin dhamaan bulshada reer Somaliland
Arrimahan soo socoda
Shaqo qorista oo qaraabo kiil u badan
Deeqaha waxbarshada debada ay Wiil wasiir dhalay ku tagaan markasta !
Caasimada dalka dulmida dalka intiisa kale
Golaha baarlamaan oo gabay waajibaadkiisa daba gal shaqada qaranka.
La xisaabtan la.aanta masuuliyiinta xilka qabta !
2) dalkani waa dal muslim suni ah boqol kiiba boqol waxa madaxweynuhu masuulka yahay diinta islaamka findinteeda iyo dhowristeedba waxa aad moodaa in la iska ilaaway taas oo aan loo sameyn waxa qorshe ah oo ku aadan arintan
Macalimiinta oo aan quranka dhiga oo aan dawladu wax mushahar ah siin§ Dad reer miyi ah aad ugu liita helida macalimiin quranka dhiga
Haddii ay helaan macalin quranka dhiga ma awoodaan qarashaka macalinka.
Haddaba waan in ay dawladu u samayso qorshe lagu baro quranka dadka reer Somaliland gaar ahaan reer miyi .
3) haddii uu madaxwaynuhu ku doorto wasiirada kuwo ku haboon wasaarada loo magacaabay oo aqoon u leh (how can president choose his minsters for a right place and right position ) waxa dalku uu ku talaabsan doonaa horumar la taaban karo.
4) waxa aan madaxweynaha u soo jeeedin lahaa in qorshe cad oo dib u dejineed u sameeyo dadkii xooluhu ka bexeen gaar ahayn gobolada bariga oo ay baartii caydhaysay. Sidaa awgeed waxa loo baahan yahay waxa bedela xoolihii ay dadku ku noolayeen sida beeraha oo loo sameeyo meelo ku haboon beero.
Hadaba waxa la gudboon dawlad cusub ee uu madaxweynuhu dhisayo ay noqdaan qaar xogagaal ah oo aan ahayn xogmoog ah.
5) dalkan waxa uu baahan yahay in uu noqdo dal waxa soo saarleh oo isagu cuntadiisa soo saara taasi waxa ay kuu sahli doontaa in dhaqaalahu kordho maadaama dalku yareeyo waxyaabaha dibada laga soo keeno.
6) dalkani waa madaxbanaani haystay ilaa1991-2017 oo ay ka soowareegtay 26 sano, taas oo mudo xileed shanta sano dhamaadkiida 1991-2022 oo ay ka soo wareegi doonto 31sano .
7)Agaasime waaxdada maamulka lacagta waa meesha uu ka bilaabmo musuqmaasuq ee ha la bedelo dhamaan agaasime wasaaradaha joogay ilaa xukumadii Maxamed xaaji ibraahim cigaal alle ha u naristee!
Ciidanka Somaliland Oo Heegan La Geliyay Iyo Xaaladaha Soo Kordhay Oo La Iftiimiyay + Maalinta Berri Ah Oo La Oogayo Sal
[DEG DEG:-] Xaaladda Tuke-raq Oo Kacsan, Ciidamadii Maamulka Puntland Oo Dagaal Raba Iyo Somaliland Oo Heegan Gashay
[Deg Deg] Beer Aan La Garanayn Waxa Uu Yahay Oo Ciidammada Booliiska Somaliland Gacanta Kusoo Dhigeen